Izici zokuqhekeka nokubhinca kwe-Narrowtex | I-Narrowtex
by UMarcia Rossouw	 August 13, 2020
INarrowtex ikhiqiza ukuqhuma nokubhinca kwekhwalithi ezimakethe zaseNingizimu Afrika nezithumela kwamanye amazwe. Ibanga lethu lifaka ukwelukwa kwe-polyester nokweluka, ukubopha okuhlanganisiwe nokubopha okuhlanganisiwe. Sinazo iziqinisekiso ezilandelayo: ISO9001, ISO14001, AAR, DNV.GL ne-IATF16949
I-NARROWTEX LASHING KANYE NOKUQAMBA UMBHALO WOKUQALA WOKUQALA
Sula i-POLYESTER LASHING
Isitsha Lashing kusuka kwaNarrowtex kwenziwa ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lokushaywa kwemithwalo luphephile futhi luvikelekile. Uhla lwethu lokushaywa kwezimpahla luthengiswa ngaphansi komkhiqizo i-NARROLASH ™ futhi uhla olubanzi lwemikhiqizo lungangena ezinhlelweni ezahlukahlukene zokuvikela izimpahla. Uhla lwethu oluyisisekelo yi I-Association of American Railroads (AAR) iqinisekisiwe.
WOVEN POLYESTER UKHANDA
Ububanzi be-Narrowtex polyester nokwelukiweyo strapping Imakethwa ngaphansi komkhiqizo i-NARROSTRAP ™ futhi iyisixazululo esikahle sezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene njengoba intambo ephothiwe ye-polyester ingahlukani, iyaguquguquka futhi ingasetshenziswa yonke indawo. Ihlanganiswe namabhakede, amathuluzi nabahlukumezi, iNarrostrap inikeza isixazululo somhlangano esithembekile. Ukubhinca kungabanjiswa kusetshenziswa amathuluzi wokuphikisana namabhukwana noma womoya.
UKUQINJELWA NGOKWAKHIWA / KWEKHODI
I-Narrowtex Ukubopha okuhlanganisiwe yenziwa kusuka ekuqineni okuphezulu kwe-polyester yarns futhi kufakwe ku-polymer enekhwalithi ephezulu. Ukubopha okuhlanganisiwe, okubizwa nangokuthi intambo yezintambo noma insimbi yokwenziwa, kungenye indlela ephumelelayo yokubopha insimbi, ukubopha insimbi nokubopha kwepulasitiki. I-Composite Strapping ayigqwali futhi ngakho-ke ngeke ilimaze imithwalo eyigugu ngesikhathi sokuhamba nokugcinwa. Idizayinelwe ukumunca imithelela nokulayisha okuguqukayo ngesikhathi sokuhamba futhi ngokungafani nokuboshwa kwensimbi ngeke kudabuke noma kuphule.
UKUBHODWA KWEBONDED / HOTMELT
Ukubopha okuhlanganisiwe, okunye okubizwa ngokuthi ukubopha okushisayo, kunezinzuzo eziningi kunemikhiqizo ejwayelekile eyenziwe ngesandla efana nemichilo yensimbi, ukubopha insimbi, intambo, imichilo yepulasitiki nefilimu elula. Uma kuqhathaniswa nale mikhiqizo ukubopha okuhlanganisiwe kusetshenziswa ngendlela esheshayo, ephephile futhi engambi eqolo. Ukubhinca okuhlanganisiwe kungahlanganiswa nefindo elilula noma kusetshenziswe ngokuhlanganiswa namabhakede, amathuluzi kanye nabaphikisi, okunikeza amasistimu wokujoyina athembeke kakhulu. Ingavinjelwa kusetshenziswe amathuluzi wokuphikisana ngesandla noma womoya.
ukubopha okuhlanganisiweukubopha okuhlanganisiweintamboukubopha okushisayoi-polyester ephothiweukubopha i-polyester